Incoko ye-Instagram: Sebenzisa kunye neengcebiso kwiselfowuni nakwiPC ▷ ➡️ Abalandeli ▷ ➡️
Izicelo | Iingcebiso
Incoko ye-Instagram: Sebenzisa kunye neengcebiso kwiselula nakwiPC
NgoSeptemba 13, 2017 0 IiCententarios 407
El Incoko ye-instagram Ibe yimpumelelo ukusukela oko yasungulwa kwaye ayisiyonto eyothusayo leyo, kuba imiyalezo ekhawulezileyo kwezinye iinethiwekhi zentlalo ibe sisixhobo esisebenzayo ukuze sikwazi ukuhlala phezulu kwiiwebhusayithi okanye usetyenziso.
Kudala sinexesha lokukhetha ukuthumela imiyalezo yabucala okanye ethe ngqo evela kwi-Instagram usebenzisa usetyenziso olusemthethweni, nangona kunjalo, ngenxa yeemfuno zomsebenzisi ngamnye, i-Instagram ikhethe okungakumbi.
Kule nqaku asichazi nje indlela yokusebenzisa ingxoxo ye-Instagram, kodwa nendlela yokusebenzisa umyalezo othe ngqo osebenza kuzo zonke izixhobo zakho ngeendlela ezahlukeneyo. Ungaphoswa yiyo!
I-Instagram ngqo okanye i-DM
Eyona ndlela ilula yokusebenzisa ingxoxo yakho ye-Instagram kukusebenzisa nje ukhetho Ngqo kwi-Instagram o DM ukusuka kwi-app esemthethweni. Ukusetyenziswa kulula kwaye isixhobo sinayo yonke eminye imisebenzi yokwabelana ngomxholo, ngenxa yoko sinokusebenzisa ithuba lokusebenzisa yonke imisebenzi yeapp.
Indlela yokuthumela umyalezo wangasese kwi-Instagram app ilula. Kuya kufuneka ulandele la manyathelo alandelayo:
Ukusuka kwikhaya lesicelo khetha iqhosha lencoko ye-Instagram ebekwe kwikona ephezulu ngasekunene kwesixhobo sakho
Khetha umfowunelwa ofuna ukuthumela umyalezo kuye. Ukuba eli lixesha lokuqala othumele umyalezo, kuya kufuneka ucofe "Thumela umyalezo" emva koko ukhethe umfowunelwa ofuna ukuthumela kuye i-DM
Bhala umyalezo wakho kwaye ucinezele "Thumela" [/ su_not]
Inketho: Ukuba ucinga ukuthumela umyalezo kubantu abaninzi, kuya kufuneka ubangeze kwicandelo elithi "Ku:" ngokongeza amagama okanye ii-ID zabasebenzisi kwi-Instagram.
I-Instagram kutsha nje isungule isicelo esibizwa ngokuthe ngqo kwi-Instagram esisesigaba sophuhliso kwaye efuna ukujolisa ikakhulu kuluntu olufuna ukunxibelelana ngokukhawuleza nangokufanelekileyo kunxibelelwano lwabo lwe-Instagram.
Kwenzeke ngaphambili nge-Facebook xa igqiba kwelokuba yahlule iqonga le-Facebook kwi-Messenger ukubonelela ngamava akhululeke ngakumbi aguqulwe kwiimfuno zomsebenzisi ngamnye.
Ngale ndlela, i-Instagram ikwathatha isigqibo sokuhambisa kwakhona injongo yayo kwinto eyahluke kakhulu ekwabelaneni ngeevidiyo kunye neefoto.
Ngaphandle kwamathandabuzo, esi sisigqibo esibalulekileyo kwaye silumke kakhulu kubaphathi, nangona kunjalo, ukunqongophala kophuhliso kwisicelo kuye kwathetha ukuba uninzi lwabasebenzisi banamava amabi xa besebenzisa usetyenziso.
Kuko konke oku, kufuneka songeze ukuba isicelo songeza nomsebenzi wokujonga nokongeza amabali e-Instagram. Ngamafutshane, sithetha ngesicelo esifana kakhulu ne- WhatsApp.
Ewe kunjalo, sithetha ngesicelo esisaphuhlayo, nangona kunjalo, sele isungulwe kwivenkile yeGoogle Play.
Abanye abasebenzisi baxele ukungaphumeleli xa kufikwa ekuthumeleni umxholo kwabanye abasebenzisi, ngezaziso kunye nokuhambelana kwesixhobo.
Ngapha koko, ngokutsho kwivenkile efanayo kaGoogle, esi sicelo asinalo uguqulelo oluzinzileyo lwezixhobo kwaye lunokwahluka ngokuxhomekeke kwi-smartphone okanye kwithebhulethi efakwe kuyo.
Akukho zinkcazo zokwenyani kuhlobo lwe-Android olucelwe sisicelo, ke kuhlala kukulinda ukuba isicelo sikulungele ngokupheleleyo.
Ngaphambi kohlelo lokusebenza olusemthethweni lwe Ngqo kwi-Instagram iphume kuGoogle Play bekukho ingxelo engamiselwanga yesicelo. Ngapha koko, usazulazula.
Sicebisa ngokungathandabuzekiyo ukukhuphela usetyenziso olunje, njengokukhuphela usetyenziso ngaphandle kweGoogle Play ithatha umngcipheko omkhulu kakhulu Kwisixhobo sakho.
Usebenzisa njani ngqo ukusuka kwi-Instagram ukuthumela umyalezo wabucala
Incoko ye-Instagram kulula kakhulu ukuyisebenzisa kunye nokunye okuninzi xa usebenzisa ngqo kwi-Instagram. Sichaza:
Khuphela i-Instagram kwaye ungene kwi-app usebenzisa iziqinisekiso zakho. Ukuba sele ungene ungene akunyanzelekanga uyenze kwakhona, tsiba nje eli nyathelo
Khuphela ngokuthe ngqo kwi-Instagram kwiGoogle Play kwaye uyifake
Nje ukuba ufake isicelo, cinezela iqhosha Imiyalezo ibekwe kwindawo esezantsi yesicelo
Thumela imiyalezo oyifunayo kubahlobo bakho [/ su_not]
Qaphela: Kungenzeka ukuba isixhobo sakho asihambelani nale nguqulo ye-Direct evela kwi-Instagram. Ukuba kunjalo, linda uhlaziyo lwe-app okanye uzame ukhetho olungezantsi.
IG: dm isisombululo sokusebenzisa i-Instagram ngqo kwi-PC
Ukuba kukho into eye yawela ezingqondweni zethu, kukujonga imiyalezo ye-Instagram kwiPC. Oku ngaphandle kwamathandabuzo.
Iselfowuni ikulungele kakhulu ukuyijikeleza, kodwa kube kanye ekhaya, ukuhlala ne-smartphone yonke imihla akonwabanga kwabaninzi, ubuncinci xa kuziwa ekubhaleni yile ndlela iyiyo.
Nokuba ungakanani ubungakanani bescreen okanye ukhululeke kangakanani iselfowuni, iya kuhlala ilula ukuyichwetheza kwikhibhodi yekhompyuter.
Kwaye, ngelixa i-Instagram ingazange iyeke ukucinga ngabantu abangathanda ukusebenzisa i-Instagram chat kwi-PC kunakwiselfowuni, abanye abasebenzisi beGitHub behlile ukuze benze i-IG: dm, a iprojekti yomthombo ovulekileyo esivumela ukuba sisebenzise incoko ye-Instagram okanye i-Direct Direct ngendlela elula, ekhawulezayo nesimahla.
Kukho abantu ababonelela ngenye indlela yokusebenzisa i-Instagram imiyalezo ethe ngqo kwikhompyuter ebandakanya i-emulator ye-Android, kodwa obu buchule, ukongeza ekufuneni izixhobo ezingaphezulu kwikhompyuter yethu (i-RAM, iprosesa kunye nemizobo), ayisiniki mnandi amava afana ne-IG: dm.
Eyona nto intle malunga nesi sicelo kukuba ukongeza ekubeni simahla, iyafumaneka IWindows, iMacOS kunye neLinux.
Uyisebenzisa kanjani i-IG: dm ukusebenzisa incoko ye-Instagram
Sebenzisa i-IG: isicelo se-dm sePC silula, kuya kufuneka ulandele la manyathelo alandelayo (Windows).
Ngenisa i IG iwebhusayithi esemthethweni: dm
Kuxhomekeka kwisixhobo sakho, khetha ukuba ufuna ukukhuphela umxhasi weWindows, iMacOS okanye iLinux ngokucinezela iqhosha elichaphazelekayo
Lindela inkqubo yokukhuphela ukugqiba kunye nokuqhuba isifaki
Qalisa usetyenziso kwaye uza kubona ujongano olufana nolo lwe-Instagram. Kufuneka ungene ngegama lomsebenzisi kunye negama lokugqitha uze ucofe ku Ngena kwi-Instagram
Nje ukuba ungene, kufuneka ukhethe omnye wabafowunelwa ukuba ubathumele umyalezo
Kulabo ungabongeziyo, kuya kufuneka ubakhangele ngebhari yokukhangela kwikona ephezulu ngasekhohlo usebenzisa i-ID ye-Instagram. Emva koko ungamthumelela umyalezo.
Khumbula, IG: dm ayisosicelo esisemthethweni se-Instagram, nangona kunjalo ikhowudi yenkqubo icocekile kwiintsholongwane.
Indlela yokungena kwi-IG: dm nge-Facebook
Kwimeko apho iakhawunti yakho yenziwe nge-Facebook, umsebenzi unzima ngakumbi, ukusukela ngoku isicelo sedesktop ayinankxaso kuFacebook. Sichaza indlela yokusombulula:
Ngenisa i I-Instagram iwebhusayithi yokubuyisela iphasiwedi
Faka i-imeyile, umnxeba okanye igama lomsebenzisi elibhaliswe kwi-Instagram. Ukuba awuzikhumbuli, ungazijonga kwisicelo esikweli candelo IProfayili
I-imeyile enemiyalelo yokusetha kwakhona iphasiwedi iya kuthunyelwa kwi-imeyile yakho. Landela imiyalelo
Nje ukuba iphasiwedi itshintshwe, fikelela kulwazi kwi-IG: dm
Qiniseka ukuba useta igama eligqithisiweyo onokulikhumbula ngokulula. Ngaphandle koko, unokulahla ukufikelela kwiakhawunti yakho de uyitshintshe kwakhona.
1 I-Instagram ngqo okanye i-DM
2 Ngqo kwi-Instagram
2.1 Usebenzisa njani ngqo ukusuka kwi-Instagram ukuthumela umyalezo wabucala
3 IG: dm isisombululo sokusebenzisa i-Instagram ngqo kwi-PC
3.1 Uyisebenzisa kanjani i-IG: dm ukusebenzisa incoko ye-Instagram
3.2 Indlela yokungena kwi-IG: dm nge-Facebook
NgoSeptemba 10, 2017
Ngubani onabalandeli abaninzi kwi-Instagram kwi-2018?
NgoSeptemba 15, 2017
Abahleli bevidiyo abalungileyo be-Instagram